Maxay yahiin qodobada la tixgalinayo marka la dooranayo qalabka alaabta guriga dibedda ah?
Xilliga xagaaga ayaa imanaya, iyo qalabka guryaha dibedda ayaa dhowaan la isticmaali doonaa. Waxaa laga yaabaa inaad tixgeliso in qalabka guryaha dibaddu leeyahay inuu lahaado astaamo isku mid ah sida qalabka guryaha sida miisaska, kuraasta iyo fadhiga, sida adkeysiga, raaxada iyo qaabka (iyo dabcan, qiimaha). Kuwani waa lagama maarmaan. Laakiin kala duwanaanta ugu weyn ...
Fursaduhu sidoo kale waxay noqon karaan farshaxan
Qalabka guryaha qaarkood laftiisa ayaa ka kooban waxyaabo farshaxan ah, gaar ahaan kuwa qoryaha, birta, dhoobada ama xarkaha, kuwaas oo loo kala saari karo qayb kale oo aan ka ahayn kuraasta wax ku oolka ah. Haddii ay suurtagal tahay, weydii farshaxanka inuu fiiriyo meesha beertaada iyo alaabta guriga la dhigayo, ama u sii tiro badan ...
Waa maxay shuruudaha alaabta guriga dibedda?
Si looga dhigo alaabta banaanka si fiican ula jaanqaadka deegaanka banaanka oo dadku ka helaan nolol firaaqo iyo hawlo raaxo leh oo deegaanka banaanka ah, alaabta banaanka sida caadiga ah waxay leeyihiin shuruudaha soo socda: 1. Nolol dheer, adkeysi leh Marka la barbardhigo qalabka banaanka, kuwa ugu caansan .. .